Kuqeqeshwe abasebenzi basezindlini | News24
Kuqeqeshwe abasebenzi basezindlini
Izithombe : zithunyelwe UNks Elsi Mkhize noNksz Gift Phakathi wakwa-Defy
ABASEBENZI base zindlini bathole ukuqeqeshwa mahhala yinkampani eyaziwa ngothi yi-Hirsch's e-Hillcrest ngeledlule. Okhulumela abakwa-Hirsch's uNkk Taryn Taylor uthe lokuqeqeshwa bekumayelana nokufundisa abasebenzi ngokukilina kubalwa ukuwasha amabhodwe awu hlobo lwe-non stick; baqeqeshelwa ukukhipha u-ayisi efrijini nokunye nokuklina izindawo ezibalulekile. “Abasebenzi baphinde baqeqeshelwa nokuthi zikilinwa kanjan izinto ezisebenzisa ugesi bafundiswa nezindlela eziningi zokukilina,” kusho uNkk Taylor.
Emva kokuba abasebenzi bafunde ngokukilina kube khona umncintiswano lapho bekukhethwa khona ama gama phecelezi i-lucky draw, etholwe nguNks Princess Movuso othole umklolemelo we-Hemp Hand protector eyenziwa yinkampani yakwa-body shop.
“Sihalalisela uNks Elsie Mkhize owine umklomelo wemali engango R500 yokuthi athenge esitolo sakwa-Hirsch's ngokuba wumsebenzi wekhethelo kwinyanga kaMasingana (January) ngaphansi kwesigaba esithi-Domestic Worker of the month.”
Umqashi kaNks Mkhize, UNks Louise MacLeod uthe: “Indlela uNks Mkhize abejabule ngayo ibibhalwe ebusweni ngesikhathi ngimtshela ngaloku qeqeshwa okwenziwa yinkampani yakwa-Hirsch's. Ubeqala ukuthola ukuqeqeshwa okufana nalokhu futhi usengisebenzele iminyaka elinganiselwe kweyi-22. UNks Mkhize uwumsebenzi engimthanda ngenhliziyo yami yonke, usefana nomama wamadodakazi ami amabili. Uwanakekele selokhu azalwa yize impilo yakhe ike yabanzima ngaphambilini kodwa lokho akuzange kumuqede amandla ngoba uwumuntu ohlezi enethemba lokuqhubekela phambili. Ngimuthanda ngoba uwumuntu ohlezi ehleka ngisho engibingelela. Uyisiboenelo esihle kwabanye futhi lomklomelo umfanele,”kusho uNkk Elsie.
Iklasi elilandelayo lokuqeqesha abasebenzi lizoba ngomhla ka-2 kuNhlolanja (February) ngo-9 ekuseni enkampanini yakwa-Hirsch’s e-Hillcrest. Uma uthanda ukuba yingxenye yaleli klasi shayela uNks Taryn Taylor enombolweni ethi: 031 761 7500 noma uthumele ikheli le-email elithi tarynt@hirschs.co.za.
49% - 5444 votes
45% - 5008 votes